ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၂-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၂-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- အင်အားပြင်း မုန်တိုင်း ရခိုင်မောင်တောဒေသကို ၀င်ရောက်ဖွယ်ရှိ click
- ရခိုင် ဆိုင်ကလုန်း အန္တရာယ် သတိပေး click
- ရခိုင်တလွှား မုန်တိုင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ချက် click
- မဟာစင်မုန်တိုင်း အားကောင်းလာ click
- အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာ မုန်တိုင်း အားပြင်း click
- အခြေခံဥပဒေ မပြင်ရင် ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ဘူးလို့ KNPP ဆုံးဖြတ် click
- လူမပြောင်းဘဲ မူပြောင်းရုံနဲ့ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်နိုင်မလား (တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း) click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စိစစ်ရေးကော်မတီ အကျဉ်းထောင်တွေကို ၀င်ရောက်လေ့လာမည် click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ (တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း) click
- ဒုက္ခသည်တွေ နေရာဟောင်းမှာ ချထားရေးအစီအစဉ် ဒေသခံတွေ ကန့်ကွက် click
- ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ၇၇ နှစ်ပြည့် ဗကသများ ကျင်းပ click
- အခမဲ့ပညာသင်ကျောင်း ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချီးကျူး click
- သမ္မတကြီး တောသွား တောင်သွား၊ လယ်သမားတွေကို တနပ်စားခိုင်းမယ် မထင် (ဆောင်းပါး) click
- လူထု လိုချင်တဲ့ သတင်းတွေကို ပုဂ္ဂလိကနေ့စဉ် သတင်းစာတွေဆီက ရနိုင်ပြီလား - လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ် (အသံ) click
- ထိုင်းနိုင်ငံထဲ ခိုးဝင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ မြန်မာတွေကို ဖမ်းဆီး click
- မောင်တောမြို့မှာ စိတ်ကြွဆေးပြားတွေ ဖမ်းဆီးမိ click
- မြန်မာနိုင်ငံက မီးတွင်းမိခင်တွေရဲ့ အခြေအနေ click
- မြန်မာစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ click
- အရောင်မှိန်သွားသော အိမ်မက် click
- BBG အသံလွှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်သစ် အိုဘားမား အဆိုပြုမည် click
- အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော တောင်ကိုရီးယား ရောက် click
- တူရကီ နယ်စပ်မြို့မှာ ကားဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ခံရ click
- အီရန် သမ္မတဟောင်း Rafsanjani လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ဖို့ မှတ်ပုံတင် click
- ပါကစ္စတန် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Nawaz Sharif အောင်ပွဲခံ click
- ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် သူ့ပါတီ နိုင်ကြာင်း ကြေညာ click
- အကြမ်းဖက်မှုကြား ပါကစ္စတန် ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးသူ များ click
- ပါကစ္စတန် ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုရှိ click
- ရေဘေးက သီသီလေး လွတ်လာတဲ့ အလုပ်သမားတွေ (ရုပ်သံ) click
- FA ဖလား Wigan အသင်း အနိုင်ရ click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 2:24 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလက်ပံတောင်းတောင် အစီရင်ခံစာ ကိုကာကွယ်ပြောဆို ရာမှာ သံဃာတွေမီးလောင်တိုက်အသွင်းခံရ မှုမှာ မီးလောင်ဗုံး
ပစ်တဲ.ရဲတွေ အပြစ်မရှိဘူးလို. ပြောပါတယ် ။
... ဒါဆိုရင် သံဃာတွေမီးလောင် မှုမှာ အောက်ပါ
တစ်ခုခုတော. ဆက်ပြီး ပြောဆိုသင်.ပါတယ် ၊
(၁) မီး ခိုးဗုံးပစ်တဲ.ရဲတွေ မှာအပြစ်မရှိ ပါဘူး ၊ အမိန်. ပေးစေခိုင်းသူ မှာဘဲတာဝန်ရှိပါတယ် ။
(၂) မီး ခိုးဗုံးပစ်တဲ.ရဲတွေ မှာအပြစ်မရှိ ပါဘူး ၊ အမိန်. ပေးစေခိုင်းသူ မှာလည်းတာဝန်မရှိပါဘူး ။
(၃) သံဃာတွေဘက်က မှားတာပါ ။
.... တချိန်က ပြည်သူတွေကို မိန်.ခွန်းပြောရင်
" မှန်တာကို မှန်တယ်လို.ပြောရဲရမယ်၊ မှားတာကို မှားတယ် လောက်တော.ပြောရဲကြပါ ၊ မှားတာကို မှန်တယ် မလုပ်ပါနဲ. ၊
.. ကြောက်ရင်လည်း မျက်စိဖွင်.ကြောက်ကြ ၊
မျက်စိမှိတ် မကြောက်ကြနဲ. လို.ပြောတာမှတ်သားမိလို.ပါ ။
.. သံဃာတော်တွေကိစ္စ ပြည်သူတွေ ကို ဂဃနဏ ရှင်းပြသင်.ပါတယ် ။
ခင်ဗျာ စိတ်ဝင်တစားပြောဆိုလိုလျှင်အစီရင်ခံစာကို အစအဆုံး ဖတ်ပါ ရနိုင်တဲ့ နေရာတွေကပေါ့သေချာလေ့လာပြီးမှ ပြောပါ မိမိထင်ရာမြင်ရာတွေလျှောက်ပြောတာကို မိမိတာဝန်ယူပါသလား
ပေါက်ကတွေ လျှောက်မေးပြောနေရင် ကိုဦးဏှောက်မရှိတာ လူအများသိသွားမှာကြောင့် အကြံပြုတာပါ